Pakistan beat Zimbabwe by 85 runs - Thatscricket Oneindia
Home » NewsPakistan beat Zimbabwe by 85 runs
Harare, Sep 16: Opener Mohammad Hafeez hit a half-century before taking four wickets with his off-spin to guide Pakistan to a comprehensive 85-run win over Zimbabwe here today. Hafeez (71) and fellow opener Asad Shafiq (38) put on 74 runs for the first wicket, taking advantage of some wayward bowling and poor fielding by Zimbabwe to set Pakistan on the path to 198-4. He then bowled with good accuracy to remove Hamilton Masakadza (12), Chamu Chibhabha (28), Elton Chigumbura (1), and Ray Price (3) as Zimbabwe were bowled out for 113 in 15.2 overs. Sohail Khan took 2-13 from his two overs while Sohail Tanvir, Aizaz Cheema and Saeed Ajmal grabbed a wicket each as the Pakistan attack put pressure on the Zimbabwe batsmen, who were outdone by accurate bowling and clean fielding. Charles Coventry top-scored with 30 runs on his return to the Zimbabwe team while opener Chibhabha was next best with 28 runs. "It''s always disappointing when you lose that way, but we must give credit to the opposition, they played really well," said Zimbabwe coach Alan Butcher. "We haven''t really been at our best but to get 200 was always going to be tough for us.We had a couple of bright spots. Chamu (Chibhabha) and (Charles) Coventry struck some good blows but no one got in to make an additional contribution." Earlier, Hafeez hit a cracking half-century as Pakistan totaled 198-4 on a good batting track at Harare Sports Club.AP
Read more about: pakistan, zimbabwe, harare, mohammad hafeez, century